Hoggaamiyaasha Maamul Goboleedyada Oo Shir Ka Dhan Ah DF-ka Ku Qabsanaya Magaalada Garoowe.
Saturday February 10, 2018 - 08:41:35 in Wararka by Super Admin
Ismariwaaga u dhaxeeya Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka ayaa lafilayaa in markale uu cirka iskusii shareero inkastoo Farmaajo uu sheegay in dib uheshiisiin 'Qaran' lagusoo dabaalay khilaafkii jiray.
Cabdi Wali Gaas oo ku magacaaban madaxweynaha Maamulka 'Puntland' isku magacaabay ahna hoggaamiyaha Golaha iskaashiga Maamul goboleedyada ayaa soo saaray qoraal uu ku iclaaminayo kulan ay yeelanayaan madaxda golahaas ku mideysan.
Gaas ayaa casuumaad uu u diray hoggaamiyaasha maamul goboleedyada wuxuu ku sheegay in kulankan uu yahay mid looga arrinsanayo danaha 'Dowlad goboleedyada' sidoo kale wuxuu sheegay in kulankan arrimo kale lagu faaqidi doono.
Kulanka ayaa Bisha soo socota ee Maarso ka dhici doono magaalada Garoowe oo xarun u ah Maamulka 'Puntland', waxaana loo badinayaa in shirkaas lagu mucaaradi doono Madaxda dowladda Federaalka oo bilihii lasoo dhaafay lakulmayay culeysyo dhanka siyaasadda ah.
Shaki kuma jiro in madaxda dowladda Federaalka aysan raalli ka aheyn dhismaha golaha iskaashiga maamul goboleedyada iyo kulankan la iclaamiyay balse lama oga saameynta uu kulanka ku yeelan doono cilaaqaadka dhinacyada u dhaxeeya.
Mudadii sanadka aheyd ee Farmaajo ee xilka hayay ayuu wajahayay jallaafeyn uga imaanaysay hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo isku arka kuwa kamadax banaan maamulka Villa Somalia.